Cudurka Jabtada / Jabtida (Gonorrhoea)
Author Topic: Cudurka Jabtada / Jabtida (Gonorrhoea) (Read 52630 times)
« on: April 22, 2008, 08:18:27 PM »
Baarista iyo muunada la qaaday waxa lagu eegaa diirada "microscope" hadii uu jiro infekshanka jabtida. Xarumaha qaarkood jawaabta markiiba waa lagu siinayaa. Muunad kale waxa loo diraa laabka waxa ay inta badan qaadataa ilaa laba wiig. Daweentu waa muhiim, waana sahlantahay. Waxa lagu siinayaa antibiotics ah kiniin, sharoobo ama irbada.
Hadii aan la daweyn jabtidu waxay isu bedeli kartaa xanuunka "Pelvic Inflammatory Disease (PID)". Waxa xanuunka gaaraa dhabarka caloosha inta ka hooseesa xundhurta. PID waxay ka dhigi kartaa dumarka madhalays, ama ilmaha oo ka qoolma.
Hadii aad jabti leedahay oo aad ilme dhasho waxa aad waad qaadsiin kartaa. Waxaanu ilmuhu dhalan karaa isagoo indhaha ka xanuusanaya. Tan waa in la daweeyaa, hadii kale waxay sababi kartaa indha la'aan. Laakiin waxa fiican inta aanu dhalan in lagu daweeyo
Jabtidu waxay sababi kartaa mindhicarka iyo qaybta hoose oo bararta, taas oo keeni karta xanuun. Hadii aan la daween xanuuno kale oo tuubabka epididimis oo barara ama xannibma ayaa ka dhalan kara, kadibne madhalaysnimo keeni kara.
Akhriso cudurada kale ee galmada lagu kala qaado: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,245.0.html
Wixii su'aalo dheeraad ah noogo soo dir link-gaan: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
Views: 25177 December 10, 2007, 08:31:26 PM
Views: 13594 January 24, 2009, 11:26:50 PM
Views: 5982 May 02, 2011, 06:10:16 PM
Views: 69120 April 21, 2015, 11:16:29 AM
Views: 12984 February 05, 2011, 04:08:18 PM